HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Luganda Luvale Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Oromo Ourdou Pangasinan Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tatar Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Waray-Waray Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Miady amin’ny fahavalo maro ny vatanao isan’andro. Tsy hita maso sy misoko mangina izy ireny, nefa mety hahafaty. Mety hankarary, ohatra, ny bakteria, virosy, ary katsentsitra. * Tsy tsapanao hoe miady amin’ireny mikraoba ireny ny vatanao, satria tonga dia resin’ny hery fanefitra ny ankamaroany. Tsy voatohitra anefa izy ireny indraindray, ka marary ianao. Mila mihinam-panafody na manaraka fitsaboana hafa ianao amin’izay, mba hatanjaka ny hery fanefitrao.
Nandritra ny an’arivony taona ny olona no tsy nahay hoe mampidi-doza ny mikraoba sy ny zavamiaina bitika hafa. Hitan’ny mpahay siansa anefa taorian’ny 1800 fa mitondra aretina ny mikraoba, ka lasa afaka niaro tena kokoa ny olona. Vitan’ny mpikaroka, nanomboka tamin’izay, ny namongotra ny areti-mifindra toy ny nendra sy ny lefakozatra, na ny nampihena be ny isan’ny olona voan’izy ireny. Nirongatra indray anefa, tato ho ato, ny aretina toy ny tazovony (ngorongosy) sy ny dengy. Nahoana?
An-tapitrisany ny olona mivezivezy eran-tany isan-taona, ary matetika izy ireny no mitondra otrikaretina. Milaza ny gazety iray momba ny fitsaboana fa “mety hampiely areti-mifindra mahafaty” ny olona mivezivezy mankany amin’ny firenena samihafa.
Lasa tsy voatohitry ny antibiotika ny bakteria sasany. Hoy ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana: ‘Manomboka tsy mandaitra intsony izao ny antibiotika, ka aretina maro no mety hahafaty indray.’
Mikorontana sy mahantra ny tany sasany, ka sarotra amin’ny fitondram-panjakana ny misakana ny aretina tsy hiely.
Maro no tsy mahay ny fomba hisorohana aretina.
Na izany aza, dia betsaka ny azonao atao mba hiarovana ny tenanao sy ny fianakavianao. Ho hitanao ao amin’ny lahatsoratra manaraka, fa misy fomba tsotra sy mandaitra azo ampiasaina, na dia ho antsika atỳ amin’ny tany an-dalam-pandrosoana aza.
^ feh. 3 Tsy mankarary ny ankamaroan’ny mikraoba. Ny zavamiaina bitika dia bitika sy ny mikraoba mankarary anefa no tena resahina ato.